Kwekhanda Festive ukuba amantombazane (isithombe)
Amaholide, izinkumbulo wabo kanye nemigqondo wathola ebuntwaneni, bahlala imemori iminyaka eminingi ezayo. Ngezinye izikhathi kumnandi ukubona i-albhamu ubudala, equkethe izithombe matinees noma imisebenzi yesikole. Njalo girl Ufuna ukubukeka emuhle futhi umsebenzi umama ukumenza inkosazana yangempela. Okokuqala kudingeka unqume endleleni kanye, bese ukhethe kwekhanda ezifanele. Mayelana indlela engcono ukubeka izinwele indodakazi ngaphambi iholide, futhi ochazwe esihlokweni esithi.
Izinsiza ze-haircuts zezingane
Ukudala isitayela ezinhle, kudingeka anakekele impahla yayo:
Lokhu kulula sifinyelele ngosizo izesekeli ezisiza ukwenza noma yimaphi, ngisho zakudala hairdo, yasekuqaleni futhi engavamile. Ungakwazi unake iminsalo, yilapho bezibona khona azidingeki tie bebodwa, njengalokho senza ngaphambili. Manje kancane gum noma izinwele Ukugunda kungenziwa efakwe kuyo. Neminsalo kuhluke umbala, isayizi, simo, futhi ngokwehlukahlukana kwabo okukhona ukuze ajabulise ladies kancane nomama.
Ngu uNcibijane indlela barrettes esime zamakhekheba eqhwa, kwathi ngo-March 8 - Motifs ezimibalabala. Lokhu akusho ukulandela isizini, njengoba roses daisy zihlale efanele. ayindilinga Beautiful noma imbali zokuhlobisa kungaba isici esiphawulekayo yimuphi kwekhanda.
Kwezinsuku zokuzalwa ikamu ephelele ngomnsalo, kuze kudabuke umhlane, ubuhlalu futhi sequins. Kuyinto lula ukulungisa ehlotshisiwe kwekhanda samaholide ngakho ubheka amantombazane ngempumelelo futhi has ngokuqina. Ngoba ngisho ukusetshenziswa esilayidi esimeme ngaphezulu.
Long izinwele amantombazane
izinwele Beautiful abacaphuni - eqashelwayo version zakudala. Kodwa ngokuvamile, abanikazi elincane ezinde kuyaqabukela avunyelwe ukuncibilikisa unomphela. Ngakho-ke, isithombe esinjalo ngokwako lihlotshaniswa iholide yentombazane. Phelelisa kwekhanda kungaba imicu elikhanyayo, neminsalo kancane, barrettes, ayindilinga.
Ukudala izinwele Lihle curled, kungcono ukusebenzisa ezinamasondo ashisayo, ngoba isikhathi esifushane, futhi musa konakalisa izinwele, kokubili kusuka curling. Ivolumu kwekhanda samaholide for girls etholwe uma eluka ngobusuku obubodwa Lihle kwamagoda mncane. Lapho lokhu kwenzeka, i kancane abazitholayo ngenxa igagasi, kanti ekhephuzelayo bheka izinwele okuxekethile. Futhi kungenzeka ukuba qondanisa imicu utjuzhkom ukungadluliseli isicwebezelisi nokuzilungisa.
Zonke amantombazane tracery ugongolo eyenziwe ezigoqile ibe kwamagoda roll chetyrohpryadnoy. Ithiphu Its fixed emhlabeni iyizingxenye umsila.
Kwamagoda bheka smart njalo
kahle kakhulu, uma umama Uyothola kahle inqubo ukwelukwa openwork eluka French, okuyiwona ungasebenzisa iseluleko abangane onekhono. Ukuze Matinee enkulisa omkhulu "ubhasikidi", ehlotshiswe izimbali noma kuze kudabuke umhlane. Kahle ubukeka kwekhanda samaholide for girls, lapho izinwele is aluka in the front futhi bakhulise siphela.
bheka ngokucophelela eluka emuva wenza uhambisane imicu edonsa. Ukuze yomhlobiso wawo ingasetshenziswa esilayidi ubuhlalu, rhinestones, izikhonkwane. Lokhu eluka amanga ekhanda, efana ngisho olindele kunazo inkosazana kancane.
Fishtail nge ukusonta, aluka ngolunye uhlangothi, ubukeka ezithakazelisayo kakhulu. Yenza-ke isikhathi eside kakhulu, kodwa umphumela ejabulisa ubuhle futhi umbukwane. Ngokuvamile omama obugagu zisebenzisa izimbali zokwakhiwa, kuqhakambisa kahle iholide zezinwele for girls.
Isithombe sikhombisa inhliziyo eluka, okufana ubuhle amancane okwenziwe lula. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze uhlukanise i-Ponytail okusezingeni eliphezulu zibe izingxenye ezimbili, ngayinye plait eluka, wazibeka oluthile lwesifo senhliziyo ukubophela ongabonakali. Hairstyle ungakwazi ukuhlobisa nge kuze kudabuke umhlane, sequins, hairpins.
Zezinwele we imisila
Ukugubha kokuvula insimbi kwekhanda ofanele lwemishayo amabili ziyalingana izinwele voluminous ngemicibisholo yawo yensimbi enkulu. Uma wenze umsila nganxanye ne ukwengeza rhinestones nezikhonkwane, intombazane ngeke futhi zibukeka zizinhle.
Kuyathakazelisa ukubheka kwekhanda samaholide ngoba intombazanyana, "Iqhwa". Ukuze kubalulekile ukuba kwahlukaniswe izinwele zibe 8 onxantathu, ukubophela bands nokunwebeka umbala omhlophe ukuze uthole imisila, bese sihlanganise nabo zibe umbuthano. Lungisa kwekhanda kungaba engabonakali, futhi ukunikeza obugagu ngaphezulu ukusebenzisa upende nge licwebezele. akufanele ufune wesimethri ephelele njengoba ukunganaki lula, kunalokho, ezikhangayo.
Beautiful bheka imisila nomzimba omncane, owenziwe ngendlela uvalo. Basuke fixed izikhonkwane kanye namathiphu zinyakaze zinyakaze.
Zezinwele for amantombazane enezinwele ezimfishane
Ukuze uthole kwekhanda kwesokudla, udinga ukuba acabangele yobudala ingane. Emantombazaneni iminyaka esuka kwemithathu kuya ezinhlanu kufanelekile lula ukuhlanza ukugunda izinwele wekugcina, okuyinto kuba ifomu acwebile nje ecwaninga. Ingane kubalulekile ukuthi ukugunda izinwele lalinethezeke, kodwa umama ayethanda iDemo ukunakekelwa isikhathi sakhe. Ifanele ngqo izinwele bob, mihlobiso - isivinini ukugunda izinwele ngoba izinwele obukhulu - kubangela. Ukuletha touch yesimanjemanje esithombeni, ungakwazi bang ndawo, wenze obukhulu futhi iDemo.
Imisila phezulu, ikakhulukazi uma uvikelekile nabo bands zenjoloba izimbali, ukunikeza intombazane ukubukeka ayizingelosi. Futhi kwekhanda kakhulu samaholide ungenza sokuvalelisa amazombe.
Izinwele ezimfishane , ungakwazi eluka e spike, kusukela ethempelini beluka imicu kusukela esiphongweni ohlangothini kuphela. Eduze omunye pigtail ethempelini kuyadingeka ukuze silungise band zenjoloba noma siqhubeke sifake, ukuze uthole "kwesitsha". Lokhu kufanele kube Friend, kusukela ngenye anjalo kwekhanda samaholide for girls ngoba nezinwele ezimfishane ayigcini eside.
Zezinwele for amantombazane babo bonke ubudala
Girls bayathanda ukubukisa phambi komunye nomunye, ngakho-ke kubalulekile ukunikeza ukugunda izinwele bahlonipheke futhi intombazane phambi iholide wayengekho ecasukile. Kuyiphutha ukukholelwa ukuthi ungenza iholide zezinwele izingane efanayo samantombazane babo bonke ubudala. Eqinisweni, into abayithandayo, into ezincane futhi ukuqonda ubuhle zabo emazingeni ahlukene zingahluka.
Zezinwele for amantombazane kuze iminyaka 3 eside kubonise ukunambitheka umama ukwedlula isifiso ngokwayo indodakazi. Kusukela izinwele esikhathini esingeside, ungenza inhlanganisela imisila, kwamagoda encane. On umkhosi ukusetshenziswa lezimbali ezinhle, izimbali, noma-abarimi, futhi ingase ithathe ushingamu-ayindilinga ebandleni i-Old Style for zezinwele.
Lapho ngineminyaka engu-4 ubudala ufuna sifane nonina, ngakho angakwazi ukwenza kwekhanda ezifanele. Nakuba umphumela futhi ngeke okufanayo, kodwa ukufana Omncane kakhulu bayokwazisa, ngaphezu, kuzoba ukusondelana okukhudlwana ngokomzwelo ekuxhumaneni nengane. Futhi kungcono nentshisekelo indodakazi, lokho kwekhanda lakhe ngaphezulu ngendlela ethandwa nguye, kodwa ungavumeli intombazane kuzo ngokuvamile ngezinwele zakhe.
Eminyakeni 5 usuqalile ufuna okungaphezu kobungane yasekuqaleni kunemisebe okubi emva ebusuku kwamagoda. Amadodakazi inganikeza iholide zezinwele enjalo amahle for girls:
Indlebe zommbila, okuyinto kuyinto efiselekayo ufunde eluka usebenzisa isu elikhethekile.
umsila High, esetshenziswa ukwenza eluka, Bun ezisonga kanye imicu ambalwa mncane abasele futhi nilimaza curling.
Eminyakeni 6, zonke girl ufuna ukubukeka okungcono, ngakho-ke kubalulekile ukuthi omama abathile ukuba bathole ezithakazelisayo futhi kwekhanda engavamile. Okungcono kakhulu, yebo, cabanga inketho okunjalo, okudinga esincane isikhathi, ngoba akubona bonke amantombazane bangahlala isikhathi eside endaweni eyodwa, futhi omama ngokuvamile kudingeka isikhathi ukwenza ezinye izinto.
Kukhona zezinwele eziningi lapho ungakha wobuciko yakho. Kubalulekile kakhulu umfanekiso wentokozo okukhulu kuze ingane nonina wahlela.
Canon IXUS 170 ikhamera yedijithali: incazelo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa